“Barca 3 daba way isku darsan kartaa” Abidal
HomeWararka Maanta“Barca 3 daba way isku darsan kartaa” Abidal
Difaacyahankii hore ee kooxda Barcelona, Eric Abidal ayaa rumaysan in Barcada wakhti xaadirkani ay awood u leedahay inay isku darsato saddexda koob ee sanadkanba.
Naadiga lagu naanayso The Blaugrana ayaa si fudud ugu gudbay afarta kooxood ee isugu soo hadhaya Champions League kadib markii ay ku garaacday Paris Saint-Germain 5-1 celceliska labadii ciyaarood, halka ay wali iyagu hayaan hogaanka horyaalka La Liga isla markaana Finalka ka taagan yihiin koobka Copa del Rey, halkaas oo ay isku halleeli doonaan naadiga Athletic Bilbao.
Waxaanu Abidal, oo afar horyaal iyo Laba Champions Leagues la qaaday mudaddii lixda sanno ahayd ee uu ku sugnaa Camp Nou, rumaysan yahay in xidigaha Luis Enrique ay yihiin kuwa loo saadaalinayo inay u baxaan Finalka horyaalka Naadiyada Yurub, iyagoo doonaya inay koobabka oo dhan wada qaadaan sanadkan.
“Waxay muujiyeen inay yihiin awooda ugu saraysa ciyaartii PSG,” ayuu ka yidhi khudbad uu ka jeediyey xaflada furitaanka xarunta daryeelida iyo daweynta caruurta la nool cudurka Cancerka ee uu ku dhawaaqay.
“Waxay ila tahay inay iyagu haystaan saadaasha inay Finalka gaadhayaan. Dhabtii waxaan rajaynayaa inay sidaas yeeli doonaan oo ay markale Champions League iyagu ku guuleysan doonaan.
“Inaad saddexda kooba wada qaadaa waa marxalad aad u adag, maxaa yeelay hal daqiiqo gudeheed ayaad ciyaar guuldaraysan kartaa, laakiin maaha waxaan suurto gal ahayn. Kubada cagta ayaa iska noocaas ah. Tusaale fiican waxaa kuugu filan Bayern iyo sidii ay ugala wareegeen awoodii Porto.”
Drogba Oo Ka Fadhiistay Kubada Cagta Xulka Ivory Coast
Middlesbrough vs Brentford 2 – 2 All Goals & Highlights
30/09/2017 Abdiwahab Ahmed
Real Madrid Oo Ku Guuleystay Koobka Naadiyada Dunida
18/12/2016 Abdiwahab Ahmed